शब्दकोश: सडक यात्रा
गणतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकले नापेको बाटोमा ती भिलेनहरुको डोंब गहिरो गरी नियाल्दा यो बुझाइ धेरै हदसम्म सत्य लाग्छ । यस बीचमा 'हामी गणतान्त्रिक मुलुकका नागरिक' भन्ने आत्मरति हामीले पाएको नाफा हो । तर, यो नाफाभित्र खोतल्न थालियो भने बाउन्स चेक मात्र मिल्नेछ ।
राजतन्त्र छाडेर आएपछि विगतको भूतले हामीलाई पलापला खुबै सताइरह्‍यो । पुराना धरोहर र सम्पदा बोझ भए । राजा-महाराजाका ऐतिहासिकता जोडिएका संस्थाहरु चिलाउने काउछो बने । व्यवस्था परिवर्तनको आवेगमा विद्यार्थीले त्रिचन्द्र, रत्नराज्य जस्ता क्याम्पसका नाम खुर्केर नयाँ नाम दिए । भलै त्यसले साकार रुप लिन सकेन । यसलाई परिवर्तनमाथि नै अन्याय भनेर मान्नुपर्ने होला । उता, रत्नपार्क शंखधर पार्क भयो । सञ्चार माध्यमतिर ‘महेन्द्र राजमार्ग’लाई छुरा चलाएर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग भन्छन् क्यार । अझ नयाँ बन्ने राजमार्गलाई लोकमार्ग भन्न थालियो । धन्न राजधानी, राजदूत, महाराजगञ्ज रातारात लोकधानी, लोकदूत र राष्ट्रपतिगञ्ज भएनन् ! विशिष्ट व्यक्तिको निधनमा दिइने राजकीय सम्मानलाई लोककीय सम्मान भनिएन ! अनि धन्न राजबहादुर नामधारी व्यक्तिहरुले पुनःसंरचना हुनु परेन !
पहिला बन्ने राजमार्ग र अहिले बन्ने लोकमार्गमा के फरक होला ? बेलाबेला सोच आउँछ । लोकमार्गमा निर्माण सामग्री, प्रविधि, डिजाइन र ठेकेदार सबै एकसेएक सक्कली हुन्छन् कि ! यसैले लोकमार्ग कतै नभएको एकदम पक्का र बलियो हुन्छ कि ! लोकमार्ग निर्माणमा कहींकतै भूलवश खाल्डाखुल्डी परे पनि सवारीसाधन गुड्दा यात्रुले लचकदार र आरामदायी महसुस गर्न पाउँछन् कि ! राजमार्ग र लोकमार्गको गुणस्तर र यात्राको मजामा हुने अन्तर आफैं पत्ता लाउनुस् ।
म पनि कहिले राजमार्ग त कहिले लोकमार्गको यात्रामा हुन्छु । घर र राजधानी आउजाउ गर्दा पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग धेरै गुडेको सडक हो । बसको लामो र पट्यारलाग्दो यात्रामा गइरहँदा झट्ट बसबाट उत्रेर सुस्तरी नै भए पनि आफ्नै बुताले हिंड्दै जाऊँ जस्तो झोंक चल्छ । बस गुडिरहे पनि उही ठाउँमा स्लिप खाएर चिप्लिरहे जस्तो लाग्छ । सिटमा खुम्चिएका घुँडाहरु प्राण मागिरहेका हुन्छन् ।
मलाई हिंड्न औधि मन पर्छ । जीवनमा लक्ष्य नसोची यात्रा गर्ने मान्छे कतै पुग्दैन भन्छन् । तर, मलाई निरुद्देश्य हिंड्न मन लाग्छ । एउटा रोमाञ्चक यात्रा गरिरहँदा साँझ कहिल्यै नपरोस्, बरु ठेस जतिसुकै लागोस् । यात्रामा थकाइ होस्, कतै सुस्ताउने चौतारी होस् । कतै पुग्ने हतार नहोस् तर यात्रामा निरन्तर रफ्तार होस् । जसरी ध्यान गर्न एकाग्र चित्तमा बस्दा शरीर तरंगहरुमा पग्लिएको अनुभूति हुन्छ, हिंड्दा उसरी नै ज्यान गितार झैं बजिरहेको महसुस हुन्छ ।
राजधानी आएपछि यहाँका साँघुरा र घुमाउरा सडक नै संघर्षको साक्षी र दिनभरिको साथी भए । घुँडाको चक्का पिस्दै हिंडियो। पिंडुला पोलुन्जेल हिंडियो । पसिनाले जुत्ता भिजेर मोजा आफ्नै गन्धले ठहरै हुन्जेल हिंडियो । अब साँझ परेछ भनेर आँखाले नठम्याएसम्म हिंडियो । कुपण्डोल, नक्साल र गोठाटार काँडाघारीको चप्पाचप्पामा आफ्नो सफल/असफल यात्राको महक छ जस्तो लाग्छ ।
तर, कामकाजी भएपछि सधैं गोडाको भर परेर पनि नहुँदो रैछ । सार्वजनिक सवारीसाधन व्यवस्थित र सुविधाजनक नभएको ठाउँमा आफ्नै वाहन नभई नहुने । गत वर्षको असारमा काठमाडौं उपत्यकाभरिको लागि हुने गरी सिटी राइड बाइक किनेँ, सय सीसीको । डेरा र अफिसको संसार । कोचामकोच बसमा हिंड्नुपरेको पीडामा धेरै राहत मिल्यो । पेट्रोलको जोहो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी चाहिं थपियो ।
सडकमा सबै रेसमा हुन्छन् । काठमाडौंका गल्लीहरुमा हिंडिरहेका मान्छेहरु पनि ठेलमठेल दौडमै देखिन्छन् । मानौं स्वर्गको सीमित सिट ओगट्न सबैलाई उछिनेर पुग्नु छ । सडकमा सवारीसाधनको रेस पनि उही प्रकृतिको । फरक चाहिं सवारीसाधनको रेसले दुर्घटना निम्त्याउँछ ।
सडकमा वाहनहरुको भिडअनुसार घम्साघम्सी पनि रोचक हुन्छ । ट्रक, बस र ट्रिपर जस्ता ठूला गाडीहरुले मिनीबस, ट्याक्सी र कारहरुलाई गर्ने हप्किदप्की, तिनै ट्याक्सी र कारले झन् साना दुईपाङ्ग्रे साधनलाई पेल्ने प्रवृत्ति । समुद्रमा ठूला माछाले साना माछा खाने घटना सतहमा भइरहेको हुन्छ । अझ सडक पार गर्न जेब्राक्रसिङमा घस्रिरहेको बटुवामा सबै सवारीसाधनको आतङ्कले झलझली मृत्युको याद दिलाउँछन् ।
सिंहदरबारलाई बायाँ पार्दै अनामनगरतिर गइरहेको हुन्छु । सिंहदरबारको पूर्वी गेटमा सावधानी गराउने सूचना देख्छु – ‘तपाईंलाई सिसी टिभीले नियालिरहेको छ ।’ मानौं त्यो बाटो भएर हिंड्ने सब जनता अपराधी हुन् ! मानौं खराब नियत बोकेर हिंड्ने दुष्टहरु त्यो सूचनापाटी नेर पुगेपछि एकाएक असल बनिहाल्छन् ।
तीनकुनेस्थित कार्यालयबाट बेलुका आठ बजेतिर घर फर्किन कोटेश्वर चोकतिर उक्लिन्छु । बाइक रोक्न हात दिन्छन् ट्राफिक प्रहरी दाइले । सोध्छन् निकै हँसिलो मुहारमा – ‘सरले ड्रिङ्स त गर्नुभएको छैन नि ?’
मुस्कानसहितको सेवा पाएर दंग पर्छु म । दिनभरि अफिसमा घोटिएर आएको म जिन्दगीदेखि निकै निकै मातेको हुन्छु, जवाफ दिन्छु – ‘काम गरेर भात त खान पुग्दैन दाइ, रक्सी कसरी खान सक्नु !’
‘ल ल जानुस्‘, ट्राफिक दाइले अघिल्तिर इशारा गर्छन् ।
डेरा पुग्छु । लोडसेडिङले हरेक रातलाई झन् अँध्यारो पार्छ । चार्जर लाइटको धिपधिपे उज्यालोमा श्रीमती खाना पकाउँदै छिन् । म भोकाएको छु निकै । बेस्सरी तिर्खाएको छु । तर, खाना र पानीको लागि होइन ।
कुन बेला घाम झुल्केला र आँखाले काम पाउला ? आँखामा रहेको एक टुक्रा उज्यालोले संसार देख्न पाउला ?
मलाई फेरि सडकतिर घस्रनु छ । म यो घस्राइबाट बग्न चाहान्छु ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, February 18, 2016